आसाम भ्रमण : बिपनामा सपनाजस्तै ! :: NepalPlus
आसाम भ्रमण : बिपनामा सपनाजस्तै !
कमलराज भट्टराई२०७९ जेठ २६ गते १२:४३
मैले सानै छँदा देखि आसामका बारेमा सुन्ने गरेको थिएँ । हामी बसेको पहाडबाट हाम्रा छिमेकी र आफन्तजनहरू आसामतिर बसाई गएका थिए । कोही भने फर्केर यता आए । धेरै उतै बसे । उताबाट आउनेले सुनाउने गरेका कथाह रमाइला र रोमाञ्चकारी लाग्दथे । धेरै पछि त्यहाँ लेखिएका केही पुस्तक पढेपछि अझ रहस्यमय लाग्न थाल्यो । प्रत्येक मान्छेले ब्रम्ह्पुत्रको वर्णन अलग अलग तरिकाले गर्ने गर्दथे ।
यस रहस्यमय संसारको अवलोकन गर्ने अवसर यसपालि आसामको विश्वनाथ चारआलीस्थित विश्वनाथ कलेजले अन्तर्राष्ट्रिय साहित्यिक सेमिनारको आयोजना गरेर जुराइदियो । कलेजले आयोजना गरेको २०७९ बैशाख १ गते (१४ अप्रिल २०२२) मा हुने गोष्ठीमा प्रमुख वक्ताको रूपमा प्रा. डा. गोविन्दराज भट्टराई, प्रा. डा.अञ्जना वस्ती, प्रा. डा. विष्णु एस राई, प्रा. डा. कुमार कोइराला र बेलायतबाट आउने बिजय हितानलाई कार्यपत्र प्रस्तोताको रुपमा आमन्त्रण गरिएको रहेछ ।
पन्ध्र दिन अगावै भाइ गोविन्दराजले आसाम घुम्न जाने भए २०७८ चैत्र २८ गतेका लागि रेलको टिकट काट्ने निधो चाहियो भनेका हुँदा म, निर्मला, भाइ खगेन्द्र र बुहारी डा. व्यञ्जना समेत चार जनाले जान स्वीकृति जनायौं । उता काठमाडौंबाट आउँने टोलीमा डा. कुमार कोइराला दम्पति समेत ६ जना रहेछन । २८ गते बिहानै हामी डा. गोविन्दराज भट्टराई, डा. अञ्जना र हामी दमकका चार जना समेत ६ जना त्यसतर्फ लाग्यौं । काँकरभिट्टा पुग्दा काठमाडौंबाट आउँने डा. कुमार कोइराला र वहाँकी धर्मपत्नी सुवना कोइराला, डा. विष्णुएस राई र बिजय हितान रोयल आसाम लजमा बेलुकै आएर हाम्रो प्रतीक्षामा हुनुहुँदो रहेछ । हामी दमकबाट जाने चार जना नयाँ भएकोले चियापानसँगै परिचय गरियो ।
जंगभाइले तयार गरेको गाडीमा झोलाहरू राखेर हामी ६ जना पुरूष त्यसैमा बस्यौं र चारजना महिला जंगको गाडीमा । मेची पुल तर्नासाथ पारिका सुरक्षाकर्मीहरूले घेर्न थाले । पालैपालो परिचय पत्र र खोपकार्ड देखाएपछि अर्को पोष्टमा झोलाहरू जचाउँनु पर्नेभयो । भारी धेरै हुनाले गाडीबाट उतारेर लान गाह्रो थियो । उताको निमन्त्रणा पत्र देखाएर बिन्ती बिसाउँदा पार लाग्ला कि भनेर कुमार सरले कोशिस गर्नुभयो ।तर लागेन ।
“सुरक्षा के मामले में कोही सम्झौता नहीं होगा” भनेर रूखो जवाफ पाएपछि कष्टसाथ सबै झोला, सुट्केशहरू गाडीबाट उतारी जाँच गर्ने मेसिनमा राखेर चोख्याएपछि पुनः गाडीमा चढाइयो । हाम्रो रेल छुट्ने समय १२ः५५ भएपनि बाटामा आइपर्ने अवरोधहरूको ख्याल गर्दै बिहानै हिंडेका हुँदा ९ः३० तिर न्यू जलपाइगुडी रेलवे स्टेशन छेउमा जम्मा भएर खाजा खायौं । हाम्रा सामानहरू स्टेशनभित्र पुर्‍याउन कुल्लिहरू मोलतोल गरिरहेका थिए । जंग भाइले सबै सामानहरू प्रवेशद्वार सम्मै पुर्‍याइदिए । हामी गाडी लाग्ने प्लेटफर्म ज्ञ ब् मा गएर बस्यौं । तीनघण्टा जति पर्खनुपर्‍यो ।
म विगत २०५३ सालमा भाइ गोविन्द परिवार भारतको हैदरबार बसेको बेला घर आएर फर्किदा रेल चढाउन एकपल्ट न्यू जलपाइगुडी आएको थिएँ । त्यो बेला झोला बोकेर आकाशे पुलको भर्‍याङ्ग चढ्न र उत्रन निकै सास्ती खेप्नु परेको थियो । अहिले प्रविधिले फड्का मारेर कति अगाडि बढिसकेछ । स्वचालित विद्यूतीय भर्‍याङ्गमा झोला समातेर उभिंदा एकै चोटी गन्तव्यमा पुगिने तर यस्तोमा चढ्न बानी नपरेकालाई भने खतरै हुने रहेछ । चढ्ने र उत्रने बेलामा निकै सावधानी अपनाउनुपर्ने रहेछ । चिया पिउँदै, घुम्दै, गफगर्दै समय बिताइयो ।
मैले पहिले जस्तैगरिका रेलवे बुक्सस्टल होलान भनेर सबैतिर चाहारें । तर डिजिटल मिडियाले पठन संस्कृतिलाई प्रतिस्थापन गरेकाले सबै बन्द भएछन् । यहाँ मात्र होईन प्रायः सबै स्टेशनहरूमा यस्तै हालत रहेछ । खगेन्द्र भाइ बेलाबेलै गुगल सर्च गरेर गाडी कहाँ आइपुग्यो भनेर हेर्दै दुरीसहितका स्टेशनका नामहरू बताइरहेका थिए । विज्ञान र प्रविधिको चमात्कार कोसौं पर आउँदै र जादैं गरेका रेल गाडीको गति र आइपुग्ने समय बसीबसी थाहा पाइने ।
पहिले हाम्रो पालाको यात्रा कष्टकर थियो । हाम्रो गाडी निर्धारित समयमा आइपुग्यो । हामी हतार हतार आफ्ना सिटहरू खोजेर झोलाहरू राखिसक्दा गाडीले गति लिन थाल्यो । हाम्रो समुहको टिकट पन्ध्रदिन अगाडिनै भाइ गोविन्दले सिलीगुडीका साहित्यिक मित्र मुक्ति बराललाई यात्रु सङ्ख्या, उमेर, लिङ्ग, आदि विवरण दिएर बुकगर्न दिएका रहेछन । र, वहाँ आफैंले हाम्रो टिकट तीन दिन अघिनै घरमा ल्याइदिनु भएको थियो । समयमै टिकट गरेको हुँदा प्रथम श्रेणीको वातानुकुलित डब्बामा आरामसाथ बस्न पाइयो ।
हामीलाई खानेकुराको चिन्ता भएन । गाडी भित्रै विविध प्रकारका खाद्य पेय पदार्थहरू प्राप्त भइरहे । त्यतिन्जेलमा हामी एकअर्कामा रामैसँग घुलमिल भैसकेका हुनाले मीठामीठा गफगर्दै गयौं । कुमार कोइराला सर धेरै रमाइलो र ठट्यौले पाराको हुनुहँदो रहेछ । वहाँ र भाइ खगेन्द्रको केमेस्ट्री मिलेकाले गफ सुन्न खुबै रमाइलो भयो । विष्णु राई सर धेरै सुन्ने र कम बोल्ने स्वभावको हुनुहुँदो रहेछ । बेलाबेला रोचक कविताहरू सुनाउँदै गर्नुहुन्थ्यो । कवितामाथि चर्चा गर्दागर्दै समय दौंडेको पत्तै भएन ।
छ घण्टापछि गुवाहाटी जङसन पुगिएछ । हामी सामानहरू उतारेर बाहिर निस्कँदा हाम्रो स्वागतार्थ गुवाहाटी विश्वविद्यालयका नेपाली विभागध्यक्ष डा. खगेन शर्मा प्रतीक्षामा हुनुहँदो रहेछ । वहाँ हाम्रो घरमा आएर बस्नुभएको हुँदा मैले परिचय गर्नुपरेन । रेलवे स्टेशन नजिकैको होटल सागर रत्नमा बस्ने व्यवस्था मिलाइदिनु भएको रहेछ । भारी सामानजति वहाँकै गाडीमा राखेर आवाससम्म पुर्‍याइदिनु भयो । बेलुका खानपिन गरेर आराम गरियो ।
भोलिपल्ट हाम्रो गुवाहाटीका प्रसिद्ध देवस्थल र दर्शनीय स्थलहरू घुम्ने र बेलुका साहित्यका महारथी लील बहादुर क्षेत्री सरलाई भेट्ने योजना थियो । यो सबै व्यवस्था डा. खगेन शर्माले मिलाइदिनु भएता पनि बिहानै दुईवटा गाडी र हामीलाई मार्गदर्शन गर्न डा. खगेनकी आफ्नी धर्मपत्नी अनुपमा शर्मालाई लिएर हाम्रो लजमा आउनुभयो । निर्धारित कार्यक्रम अनुसार बिहान होटलले उपलब्ध गराएको जलपान गरेर सर्वप्रथम निलाचल पर्वतमा अवस्थित प्रसिद्ध भगवती कामाख्या देवीको दर्शन गर्न गइयो । यो ठाउँमा वि.सं. २०१२ हाम्रा सालमै पिताजीले वहाँकी माता (हाम्री हजुरआमा) लाई ल्याएर दर्शन गराउनु भएको र पछि आमा काकाहरूलाई समेत पुर्‍याएर दर्शन गरेको कुरा आमाले बारम्बार त्यहाँको वर्णन गर्नुहुन्थ्यो । हाम्रा परिवारका प्रायः सबैजना पहिले पुगिसकेका हुँदा नयाँ म मात्र रहेछु जस्तो लाग्यो ।
आसाम क्षेत्रको मुख्य पर्व बिहूको अवसर भएकोले मन्दिर परिसर सफा गरेर भव्य रूपले विविध रङ्गीबिरङगी फूलहरूले गेटैदेखि सजाइएको थियो । दर्शनार्थी श्रद्धालुहरू बिहानै देखि लाइनमा बसेका थिए । त्यहाँ बुझ्दा मुर्तिको दर्शन गर्न बेलुका सम्ममा मात्र पालो आउने कुरा सुनेर बाहिरैबाट परिक्रमा गरी आशिर्वाद मागियो । हामी मध्येका डा. कुमार कोईराला दम्पतीले एकजना पण्डा समातेर केही दक्षिणा कवलेर फूल प्रसाद पठाई भगवतीमा अर्पण गराएर ल्याइदिनु भयो । त्यहाँ दर्शनार्थीहरूले पैसा तिरेर लाइन नबसि सिधै दर्शन गर्न पाउने व्यवस्था पनि रहेछ । सर्वसाधारणले भने लाइनमा बसेर पालो पर्खनै पर्ने । यो पर्वमा आसामभरि चारदिनसम्म सरकारी बिदा दिइदो रहेछ । यसैबाट पर्वको महत्व दर्शिन्छ ।
सयौंको संख्यामा रातो वस्त्र लगाएका सहयोगीहरू परिसरमा घुमिरहेका थिए । छिटो दर्शन गर्न चाहनेहरूसँग पैसा लिएर दर्शन गराउने प्रसाद लगेर मन्दिरमा चढाएर ल्याइदिने आदि काम गर्नेहरूको जीवीकोपार्जन मन्दिरबाटै हुँदो रहेछ । हाम्रा परिवारमा म सानै छँदादेखि जानेको हरेक वर्ष असार आठ गतेका दिन भूमिरज बार्ने भनेर जमिन खनजोत नगर्ने परम्परा थियो । यता नेपालतिर असार आठ गतेका दिनलाई भूमिरज भनिन्छ र त्यो दिन जून २२ का दिनमा पर्दोरहेछ । त्यहाँ पनि सोही समयमा जुन २२ गतेदेखि २५ सम्म माता रजस्वला भएर मानिने अपवित्र हुने मान्यता अनुसार मन्दिरको ढोका बन्द गर्ने चलन रहेछ । उक्त समयमा त्यहाँ पनि जमिन खनजोत गर्न वर्जित रहेछ ।
यो परम्परा कहाँबाट कहिले सुरु भयो र यहाँसम्म आयो होला ? यो अध्ययन् र अनुसन्धानकै विषय हो जस्तो लाग्यो । पौराणिक मिथकीय वर्णनले ढाकेर वास्तविकता ओझेलमा परेको हुनसक्छ । जे भएपनि पुराणहरूमा वर्णन गरिएअनुसार सतीदेवीका विभिन्न अङ्गहरू पतन भएर बनेका एकाउन्न शक्तिपीठ मध्ये सबैभन्दा प्रमुख मानिंदो रहेछ । मन्दिर परिसरमा घुम्दैगर्दा मनमा आयो;
हे ! माता तिमी सृष्टिकी जननी हौ,
तिम्रो नाम लिएर हजारौं पालित छन्
तिम्रो आफ्नै सुष्टि सन्ततिले
आफ्नो अभिष्ट सिद्धि प्राप्त गर्न
तिमै्र अबोध सन्ततिको
तिम्रै वक्षस्थलमा बलि चढाउँदा
कति कष्ट हुँदो हो माता ?
मन्दिर भ्रमण सकेर हामी ब्रम्ह्पुत्रको वक्षस्थलमा रहेको दोस्रो प्रसिद्ध तीर्थस्थल उमानन्द मन्दिर दर्शन गर्न ब्रम्ह्पुत्र किनारतर्फ लाग्यौं । हिजो आउँदा पुल पार गरेको भएतापनि राति भएकाले देख्न नपाएको हुँदा आज प्रथम दर्शन भयो । पुराणहरूमा वर्णित ब्रम्ह्पुत्रलाई ब्रम्हाका मानष पुत्रका रुपमा लिइने हुँदा नदीलाई माताको रुपमा नलिएर पुरूष वाचक शब्द ‘नद’ भनिएको रहेछ । पिता कैलाशपर्वत र माता मानसरोवरबाट उत्पन्न भएका चार नदीहरूमध्ये सिन्धु सतत्दु्र (सतलज) पश्चिम पाटोतिर लागेका रहेछन् । र ब्रम्हपुत्र पूर्वहुँदै भारत र बर्मा (म्यानमार) छुट्याएर आसाम प्रदशेमा प्रवेश गरी बेलाबेलामा सृष्टि, स्थिति र प्रलय तीनै रूप लिँदै सागरमा समाहित हुने क्रममा उदगम स्थलबाट दक्षिणतर्फ लागेकी भगिनी नेपाल प्रवेश गरिन् । उनी कर्णाली नामले चिनिंदै भारत प्रवेश गरेपछि पवित्रभूमि अयोध्यामा पूगी सरयु नामले पूजिँदै पवित्र गंगामा समहित भई बङ्ग भूमिमा भेट भएर सँगै सागरमा विलय भएकी छन् ।
उमानन्द हिँडेको म ब्रम्हपुत्रको प्रथम दर्शनले भावुक भएर कता पुगेछु । हामी किनारमा पुग्दा उता जाने जलायान भरिएर नदी तटलाई छोडेनै लागेको रहेछ । त्यसैले हामीले अर्को आउन्जेल एकघण्टा जति पर्खिनुपर्ने भयो । हामी प्रतीक्षालयमा बसिरहँदा यता झापा धुलाबारीका साहित्यकार पूण्य खरेलहरूको टोलीसँग भेट भयो । उहाँले आफ्ना केही कृतिहरू हामीलाई हस्तान्तरण गर्नुभयो । केही बेरपछि दुईजना युवा बौद्धभिक्षु लामाहरू भेटिए । ती मध्येका एकजना नेपाली मूलका भुटानी खतिवडा ब्राह्मण रहेछन् । उनीहरू पनि उमानन्द दर्शन गर्न हिँडेका रहेछन । अर्का एकजना भुटानी मूल निवासी उता गयातिर बस्दा रहेछन् । अङ्ग्रेजी र हिन्दीमात्र बुझ्ने । नेपालीभाषीसँग कुरा गर्दा उनी गुवाहाटी पारिको पहाडस्थित गुम्बाका पुजारी रहेछन् । उक्त गुम्बा एकजना भुटानी लामाले बनाएको र पछि संरक्षण गर्ने जिम्मा भुटान सरकारलाई दिइएको हुँदा भुटान सरकारले खटाएपछि मात्र त्यहाँ आएका रहेछन् ।
मैले नेपाली मूलका ब्राह्मण बौद्ध भिक्षु भेटेको पहिलो पटक थियो । उनीसँग केही फोटा खिचेर यताउताका गफ गर्दागर्दै हामी जानुपर्ने बिशाल जलयानले गति लियो । करिब दुई किलोमिटर जति फैलिएको नदी पारगर्न पन्ध्र मिनेट जति लाग्यो होला । रमाइला दृश्यहरू हेर्दाहेर्दै समय बितेको पत्तै भएन । पारिपुगेर अलिकति उकालो चढेपछि मन्दिर परिसर पुगिंदो रहेछ । चारैतिर पानीले घेरिएको, कडा चट्टानले बनेको टापु माथि पुगेपछि फराकिलो र समथर रहेछ । यो शिवजीको मन्दिर रहेछ । देश विदेशबाट आउने धार्मिक पर्यटक, अध्येता,अनुसन्धाताहरूको आकर्षणको केन्द्र रहेछ । यो मन्दिरमा मुख्य दर्शन गर्ने स्थान भने मन्दिरभित्र प्रवेश गरेर सिँढीबाट तल गर्वगृहमा जानुपर्ने रहेछ । त्यहाँको भनाई अनुसार पूजास्थल वरिपरि देखिने पानी ब्रम्ह्पुत्रकै पानी भनिंदो रहेछ । जलयानले घुम्नका लागि एकघण्टाको समय उपलब्ध गराउँदो रहेछ ।
निर्धारित समयमा घुमिसकेर पहिले गएका सबै यात्रुहरू यानभित्र प्रवेश गरेपछि वारिपट्टि अघि आएकै घाटमा ल्याएर उतार्‍यो । दिन ढल्कनै लागेकाले हामी बास बसेको होटलमा आएर खाना खाइ केहीबेर विश्राम गर्‍यौं । निर्धारित भ्रमण तालिका अनुसार हामीले दिनभरिका लागि लिएका सवारी साधनमा बसेर त्यहँका दर्शनीय स्थलहरू अवलोकन गर्न निस्कियौं । पहिले त्यहाँका प्रसिद्ध चारधामको दर्शन गरियो ।
भारतभरिका कुना कुनामा भएका चारधाम दर्शन गर्न सम्भव नहुनेहरूका लागि सबै तीर्थस्थललाई समेटेर यो क्षेत्रको निर्माण गरिएको रहेछ । यहाँ प्रायः दक्षिण भारतमा भएका तिरूपति बालाजी, रामेश्वरम आदि सबै मन्दिरहरू बनाइएको रहेछ । यता सिक्किम सरकारले पनि पश्चिम सिक्किमको नाम्चीमा सबै तीर्थस्थल समेटेर बिशाल मन्दिरहरू निर्माण गरेर धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्र बनाएको जस्तै । त्यहाँ पनि दैनिक हजारौं दर्शनार्थी पुग्ने गर्दछन् । दुईवर्ष अघि मैले पनि त्यो ठाउँको भ्रमण गरेको थिएँ । त्यो ठाउँ अग्लो पहाडको टुप्पोमा भएको र वरिपरिको हिमाली दृश्य पल्लो डाँडाको बिशाल बौद्धगुम्बाले त्यसै पनि आकर्षक हुन पुगेको छ ।
गुवाहाटी चारधामको अवलोकन पछि अर्कोपाटोमा रहेको वशिष्ठ गुफा र आश्रम हेर्न गयौं । धार्मिक स्थलमा सबैतिरको नियमजस्तै यहाँपनि निर्धारित स्थानमा जुत्ता खोलेर राख्नुपर्दो रहेछ । जुत्ता खोल्ने क्रममा मेले भिरेको सानो झोला त्यहि बिर्सेछु । नयाँनयाँ ठाउँ पहाडबाट फालहान्दै आएको सानो सानो झरना आदि हेर्दाहेर्दै भुलेछु । म आएर जुत्ता लगाई नजिकैको चिया पसलमा जम्मा भैसकेको समूहमा पुग्दामात्रै झोला छुटेको थाहा पाउँदा होस उड्यो । आसाम घुम्ने सबै खर्च त्यसैमा थियो । आधा मैले ज्याकेटमा बोकेर खर्चगर्दै गर्ने र आधा रकम मेरो जीवनसाथी निर्मलाले बोक्ने सानो झोलामा राख्ने गरेकोमा उनले आफ्नो झोला नबोकेर यसैमा राखेको कुरा बिर्सेको रहेछु । ब्यागभित्र खोजीहेरेँ । नभेटेपछि मेरो हालत वर्णन गरी साध्य छैन ।
म भन्दा अगाडि जुत्ता लगाउन आइपुगेका भाइ गोविन्दले बेवाारिसे अवस्थामा झोला भेटेर लगेछन् । हाम्रो टोलीका सबैले मलाईनै हेरिरहेका थिए । निर्मलाले धैर्य साथ ब्यागभित्रै खोजीगर्दा जस्ताको तस्तै रहेछ । यसरी मेरो बेहोसीले त्यहाँका सज्जन मानिसहरू प्रति शंका गरेकोमा मन खिन्न भयो र मनमनै माफी मागेँ । झोला छोडेबापत टोलीका सबै सदस्यहरूलाई चिया खुवाएर मेरो निहुँरिएको शिर उठाउने माङगेना (शिर उठाउने) कार्य गरें ।
वसिष्ठ आश्रमबाट फर्केर बासस्थानमा आई केहिबेर विश्राम गरेपछि निर्धारित कार्यक्रम अनुसार लील बहादुर क्षेत्री सरलाई भेटन गइयो । डा. खगेन शर्माले बिहान व्यवस्था गरिदिएका गाडीहरूले वहाँकै अगुवाईमा त्यहाँ पुर्‍याएर फर्किए । हामी १० जनाको टोलीमा डा. खगेन शर्मा र बहिनी अनुपा शर्मा समेत हामी १२ जना थियौं । हामी पुग्दा पूर्व जानकारी प्राप्त भएकाले सबै व्यवस्था मिलाइएको रहेछ । पल्टन बजार नजिक पर्ने शहर भित्रै भएपनि यो गुरू निवास एकान्तवन जस्तै शान्त थियो । क्षेत्री सर सन् २००८ मा आफ्नो कान्छो छोरा पल्लवलाई लिएर हाम्रो घर दमकमा आई एकरात बास बस्नुभएको थियो । पल्लव भाइ एक महिना अघि पनि हाम्रो घर आएर गएका हुँदा हाम्रा घरका सदस्यहरू प्रायः परिचित रहेछौं ।
लामो समयसम्म शिक्षण सेवामा रहेर साहित्य, वाङ्गमय कला र नाटकका माध्यमले अँध्यारोमा रुमलिएको समाजलाई उज्यालो चेतना छर्दै, आफ्नो नौं दशक लामो जीवन व्यतित गरिसक्नुभएका गुरु तपस्वी झैं लाग्ने व्यक्तिको सौभ्य मूर्तिले हर्षले गदगद हुँदै हाम्रो स्वागत गर्नुभयो । जीवनको उत्तरार्धमा पुगेर पनि अझै धेरै काम गर्न बाँकी छ । र, पूरा गरेरै विश्राम लिनेछु भन्दा हाम्रो टोलीका धेरै सदस्यहरूमा प्रेरणा र उर्जा थपिएको महसुस गरियो ।
दुई घण्टा जति साहित्य, शिल्प, कला, संस्कृति जस्ता शैक्षिक गतिविधिका बारेमा चर्चा परिचर्चा गर्दै जलपान गरियो । गुरुआमा, छोराछोरी सबै साहित्य र कलामा समर्पित भएका परिवारजन देखी हर्षित हुँदै गुरु आशिर्वाद लिएर आवासतर्फ फर्कियौं ।